Sunday October 11, 2020 - 08:10:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
hoggaamiyaha dowladda Mareykanka ayaa markii ugu horraysay meel fagaare ah kasoo muuqday tan iyo markii uu haleelay caabuqa halista ah ee Covid19.
Trump aya shaaciyay in uu kasoo bogsooday Carona Virus
Donald Trump oo isniintii lasoo dhaafay dib ugusoo laabtay Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in lasoo gaba gabeeyay dhammaan baaritaanadii caafimaad ee lagu hayay islamarkaana uu ka bogsooday cudurka Carona oo uu ku sifeeyay "Fayruska Shiinaha ee xun".
Madaxweynaha Mareykanka kuma ekaysan oo kaliya ka hadalka arrimihiisa caafimaad iyo saameynta uu Carona ku yeeshay balse wuxuu durbadiiba guda galay arrimaha siyaasadda isagoo weerar dhanka afka ah ku qaaday siyaasiyiinta Xisbiga Dimuquraadiga ah ee ay isku hayaan doorashooyinka soo socda.
Kulan cinwaan looga dhigay "Mudaaharaad Nabadeed oo Sharciga iyo Nidaamka ah" ayuu Trump khudbad ka jeediyay kulankaas oo ka dhacay barandada Aqalka Cad waxaana la arkayay boqolaal taageerayaashiisa ah oo safaf ugu jiray jardiinada hoose ee beerta guriga cad.
"Waxaan rabaa in aad ogaataan in wadankeenu ka adkaan doono viruskan xun ee Shiinaha," ayuu ku yiri dadkii uu lahadlayay kuwaas oo badankood xirnaa maaskada looga gaashaanto Covid19 balse goobta kama jirin dadaallada kala fogaynta bulshada ee dalka lagusoo rogay si Carona loo xadido.
Wuxuu intaas ku daray "Waan cirib tiri doonnaa fayruska Corona, waxaanan dib ugu celin doonnaa dalka xaalad ka wanaagsan sidii hore," isagoo ammaanay nidaamka daryeelka caafimaadka ee maamulkiisa wuxuuna ku hadaaqay in uu ka wanaagsanyahay mashruucii Obama Care ee arrimaha caafimaadka wuxuu ballan-qaaday inuu beddeli doono nidaamka daryeelka caafimaad ee uu isagu aasaasay.
Donald Trump oo aad uga cabsi qaba in looga adkaado doorashooyinka madaxtinimada ee dhici doona bisha soo socota ayaa awoodi waayay in uu isbitaalka kusii sugnaado inta xaaladdiisa caafimaad laga hubinayo wuxuuna dib ubilaabay ololihiisa doorashada.
Inta badan lataliyaashiisi iyo xubnihii qoyskiisa ayuu Carona haleelay waxayna ku suganyihiin goobaha caafimaadka ee dadka xanuunsan lagu karaantiilo, dalka Mareykanka ayaa caalami ahaan ah dalka koowaad ee ugu dhimashada iyo bukaanada badan caabuqa Covid19.